सर्जक गीता रेग्मी को पत्थरै पत्थर नामक पुस्तक को समालोचन गर्दै सोमनाथ घिमिरे !!
नियात्रा आफैमा निकै गाह्रो साहित्यिक बिधा हो । लेखनमा नै पाठकलाई घुमाउनु , हसाउनु , अर्ति उपदेश दिदै आफ्नो धारणा अनि बिचार अभिव्यक्त गर्नु चानचुने कुरा होइन ।
नियात्राकार गीता रेग्मीको पत्थरै पत्थरै नियात्रासङ्ग्रहले पाठकहरुलाई बर्मा , थाइल्यान्ड , मलेसियाका गल्ली गल्ली घुमाउन सफल भएको छ। बर्मेली नेपालीहरुको संघर्ष , सफलता , अथिती देव: भब भन्ने हाम्रो संस्कारलाई राम्रोसँग पाठकहरु माझ ल्याएको छ ।
लेखकीय धारणा व्यक्त गर्दै " समय टक्क अडिएको हुदो हो भने आजपर्यन्त मानिसहरु जङ्गलमै गिठा , भ्याकुर खोजेर हिडिरहेका हुन्थे होलान् ? वास्तवमा यात्रा नै एउटा सशक्त माध्यम थियो , जसले मानव सभ्यता सगसगै प्रविधि र ज्ञानको पनि ओसारपसार र प्रचार गर्न सम्भव भयो ।" यात्रा अनि यसको महत्वलाई दर्शायिएको छ। हुन पनि हो हाम्रो यो आँखा बिकास र परिवर्तनको ठुलो सम्बाहक पनि हो ।
यस नियात्राका काठमाडौंका यात्रीहरु सबै परिचित पात्रहरु भएकोले पढ्न उत्सुकता र कौतुलता व्यग्र भएर आयो । किताब खोल्दा चासिसे लागेका आखाले विश्राम लिन खोजे पनि यो मन पर्यटकहरुसग घुमि रहेको थियो । सुखमा रमाउदै दुखमा चिन्तित र जिज्ञासु बन्दै लेखिकाको स्मरणका पानाहरु पल्टाउदै गए । नियात्राकारको सजकता , यो माटो प्रतिको अगाध प्रेम , बिकास र शुशासन प्रतिको चिन्ता ब्याप्त छ । मलेसियामा नेपाली युवाहरुले भोगेका दुख र पिडाको जिवन्त तस्वीर यसमा समेटिएको छ । थुप्रै पर्यटकहरु दिउसै लुटिने मलेसियाको स्मरण पढ्दा महिलाहरुको यो सहास र आत्माबललाई जो सुकैले पनि सलाम गर्न मन लाग्छ र बाध्य पनि हुन्छन् । यात्राको सुन्दताको बखान र बिकासले प्रत्येक राष्ट्र र बिकास प्रेमीहरुलाई लोभ्याउछ । महिलाहरुले चाहे यो संसार जित्न र सजिल्यै बदल्न सक्छन् भन्ने वास्तविकतालाई यी यात्रीहरुको सहास र आत्माबलले पुष्ठि गर्दछ ।
समग्रमा नियात्रा बिधामा यो एउटा सफल कृति हो । पाठकहरुलाई सगै घुमाउनु र जिज्ञासु बनाउन सक्नु नियात्राकारको खुबी र क्षमता हो । जुन शुरुको लेखकीय धारणबाट नै आरम्भ हुन्छ। यो यात्रा स्मरणमा झिजो र झन्झट मान्नु पर्ने कुनै स्थान र त्यसको बर्णन छैन । यसले सभ्यता शिकाएको छ । यसले असल संस्कारको अनुकरण र अनुसरण गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । खरावलाई बिना हिचकिचावट खराब भन्दै चिन्ता र निन्दा गरेको छ ।
पुस्तक पढ्दै जादा कतिपय ठाउँमा लेखिकाका आफ्ना बिचार र सन्दर्भहरुको पुनरावृत्ति भएका छन् । भाषा शुद्धीकरणका बिषय सामान्य हुन् र यो लेखिकासग असम्बन्धित अर्थात् शुद्दासुद्धीको जिम्मा लिएकाहरुसग सम्बन्धित बिषय हो । शुन्दर र लोभलाग्दा ठाउँहरु बर्णनले जो सुकैको मन पनि लोभिन्छ । लोभलाग्दो ठाउँहरुको बर्णन र बखानसगै केही शुन्दर तस्बिर पस्किदिदा पाठकहरुलाई पुस्तक हातमा लिदै पढ्दै गर्दा झनै सिनेमा हेरेको झै आभाष हुने थियो ।
समग्रमा नियात्रा बिधामा आफ्नो एउटा शसक्त बिचार र स्पष्ट धारणा पनि दिन सक्ने यो नयाँ कृति हो । लेखिका नियात्राकार मेरी दिदी गीता रेग्मी अर्याललाई साहित्यिक यात्रा र आफ्नो बयक्तिक जीवनमा धेरै धेरै सफलताको असिम शुभकामना । उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिदी !!!
सोमनाथ घिमिरे को फेसवुक वाट साभार !!!
२०७५-जेठ-३ गते प्रकाशित